HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး41 Kocaeliနောက်တဖန်ပြုသောအမှုခံရဖို့ Karamursel Interchange တင်ဒါ
22 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 41 Kocaeli, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
Kocaeli တဲ့ Metropolitan ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Interchange အပေါ်အလုပ်မလုပ်သောကုမ္ပဏီများ၏စည်းကမ်းချက်များဖြည့်ဆည်းဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့်အထွက်သူ့အလုပ်ရပ်ဆိုင်းပိုင်ခွင့် Karamursel ဘတ်စ်ကားဘူတာနှင့်မြို့အလယ်ဗဟိုသေချာဖို့စည်ပင်သာယာအဝေးပြေးလမ်းမကြီးဆက်သွယ်မှုအားဖြင့် Karamursel D-130 နစ်မြုပ်ရှိပါတယ်။ Karamursel Interchange ၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်သစ်တစ်ခုတင်ဒါမှကူးခြင်းနှင့် output ကိုနစ်မြုပ်
41 သန်းတင်ဒါ BE ခဲ့
လူသိများသည်နှင့်အမျှ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး D-130 အတွက်မဆိုပြတ်တောက်ကာကွယ်တားဆီးဖို့လမ်းပေါ်တွင်ယာဉ်အသွားအလာနှင့်တံတားမှသက်သာရာရစေရန် Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် Karamursel Karamursel ၏မြို့လမ်းဆုံအောင်များအတွက်တင်ဒါထွက်လှည် ့. နစ်မြုပ်ခဲ့သည်။ ကုန်ကျ-လမ်းမကြီး / Alsa နှင့်အတူက Wall 41 သန်းတင်ဒါအရပ်ဘက်မိတ်ဖက်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
တည်နေရာကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ Karamursel မြို့ 08.05.2018 ကန်ထရိုက်တာကုမ္ပဏီများမှအပေါ်စတုရန်းဖလှယ်မှုကိုဖန်ဆင်းသည်အလုပ်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့တရားဝင်ပြန်တမ်းထုတ်ဝေဥပဒေများအားဖြင့်အုပ်ချုပ်ထံမှလက်ခံရရှိကန်ထရိုက်တာ s ကိုတင်ဒါတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်နေတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ခြေဖျက်သိမ်းရေး၏အချက်မှယူဆောင်လာသောအခါဇန်နဝါရီလ 18 2019 နေ့စွဲ။ သို့သော်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်လိုအပ်ချက်အတည်ပြုချက်။ Related ကုမ္ပဏီများသည်ဤပညတ်တရား၏အားသာချက်ယူချင်ခဲ့တယ်နဲ့ဖေဖော်ဝါရီ 2019 အတွက်အသနားခံစာကိုပေး၏နှင့်အလုပ်တော့ဘူး။ 26 ဇူလိုင်လ 2018 ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သင့်လျော်သောbulmadı.bတဲ့ Metropolitan ကန်ထရိုက်တာအပေါ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက၏ရပ်စဲပေါ်မှာကုမ္ပဏီငှားရမ်းထားရှိရာကနေဆက်လက်istedi.büyükşehဖြစ်ပါသည်, တစ်ဦးကန်ထရိုက်တာမှလာအလုပ်စတင်ဖို့အတွက်သတိပေးအက္ခရာများရေးသားခဲ့သည်။ အလုပ်ပြီးအောင် 10 နေ့ရက်ကာလ၌တစ်ခုလုံးကိုအလုပ်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်နောက်ဆုံးပေါ်အကျင့်ကိုကျင့်၏အထွေထွေသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီမြို့တော်သည်ကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်လုပ်နေစတင်ခဲ့သပိတ်ဆွဲငင်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့လယ်ပြင်၌စက်တင်ဘာလ 16 တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ပေါ်တွင်အလုပ်ပြီးအောင်မှလေ့လာမှုတစ်ခုလုပ်ဆောင်သွားရန်ရာကန်ထရိုက်တာအဆုံးအဖြတ်အသုံးပြုပုံကုမ္ပဏီရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပညတ်တရား၏ရပ်စဲကြောင့်စည်းမျဉ်းများကခွင့်ပြုခဲ့သည့်အခွင့်အာဏာနှင့်အတူလက်ျာဘက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး, Karamürsel Interchange နှင့်သက်ဆိုင်ရာဥပဒေပြု၏အဆုံးပြီးစီးခဲ့မခံခဲ့ရဆောက်လုပ်ရေးအတွက်သစ်တစ်ခုတင်ဒါဖြစ်သည်ထင်ရှားပြီးနောက်ဆင်းကြလေ၏။
Karamürselမြို့ရင်ပြင် Interchange လုပ်ဖို့ 04 / 07 / 2019 Marmara နှင့်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Assoc ၏အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုများရှိဆဲပြည်ထောင်စု။ ဒေါက်တာ Tahir Büyükakın, အ AK ပါတီခရိုင်နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် Karamursel Karamursel သည့်မြူနီစီပယ်သွားရောက်ခဲ့သည်။ အဘယ်သူသည်ခရိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်နှင့်သူတို့ကာလအတွင်းပေးခဲ့တဲ့အားထုတ်မှုများအတွက်အဖှဲ့အစညျး၏အဖွဲ့ဝင်သမ္မတBüyükakınရွေးချယ်ရေးကြေးဇူးတငျ, Karamürselမြို့ရင်ပြင်ထို Interchange ကြည့်ရှုအားပေးကြသည် Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်နှင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုအရေးကြီးသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများကိုဖွငျ့ဖျြောတစ်ခုဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်Büyükakın "မြို့ရင်ပြင် Interchange ငါတို့အသက်သုံးဖြုန်း, ငါတို့လူမျိုးကိုမရရှိနိုင်ပါစေ," ဟု၎င်းကပြောသည်။ ပထမဦးဆုံး AK ပါတီခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌ Recep Karamursel Demirel နှင့်စီမံခန့်ခွဲလာရောက်လည်ပတ် "ကျွန်ုပ်တို့၏အစစ်အမှန်ပါဝါကျွန်တော်တို့ရဲ့ ORGANIZATION ကျွန်ုပ်တို့၏လာ" ...
Karamursel ပို့ဆောင်ရေး Interchange အဆိုပါdalcık၏စိတ်သက်သာရာရလိမ့်မည် 02 / 10 / 2018 မြို့သူမြို့သားတစ်ဦးပျူငှါနွေးထွေးသောနှင့်အဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသဘောပေါက်ဘို့ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ကုမ္ပဏီကြီးစီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဤအခြေအနေတွင်ခုနှစ်, dalcıkလမ်းဆုံအလုပ် D-130 Karamursel မြို့ကနေအပေါ်ပြုမိသည်။ Bursa ၏ညှနျကွားမှအကူးအပြောင်းအတွက်ကြောင့်မြို့လယ်ရှိအအသွားအလာစီးဆင်းမှုကယ်တင်မည်နေစဉ်မော်တော်ယာဉ်အတွက်မြို့စတုရန်း, D-130 ၏လုပျငနျးဧရိယာသို့။ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအလှည့်ပေါ်လေး, လေးခုလမ်းများလင့်ထားသည်ပါလိမ့်မယ်။ 290 မီတာဥမင်လိုဏ်ခေါင်း Karamursel သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦများအလုပ်dalcıkလမ်းဆုံပုံကျိနဲ့သောက်သုံးရေနှင့်စွန့်ပစ်ရေကုန်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းယူသွားတတ်၏အသက်ရှူပါလိမ့်မယ်။ ခြေဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏ 290 အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ...
လမ်းဆုံAtıldı၏Karamürselမြို့ရင်ပြင်တံတားအခြေခံ 11 / 06 / 2018 Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, တစ်ဦးချင်းဘဝတွေကိုရှိခြင်းမြို့ပြယာဉ်ကြောစီမံကိန်းများကိုသက်သာရာပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့်ဆုံအသွားအလာချောမွေ့ဆောင်ခဲ့သူတို့အပျေါမှာတမြို့လုံးအတွက်အသွားအလာ၏စိတ်ဖိစီးမှုများ၏ရှေ့မှောက်၌ဖြတ်သန်းအချင်းချင်းအဝေးပြေးလမ်းမကြီးဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဤအလမ်းဆုံတစ်ခုမှာမွို့၌သော့ချက်အချက်များမှာလျှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် Karamursel မှလာသေး၏။ အရေးကြီးလမ်းမကြီး D-130 ကနေအချင်းချင်းသွားလာသည့်ခရီးသည်တင်ခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းများ, Karamursel မြို့စတုရန်းbattı- output ကို၏ပုံစံကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။ Karamürselမြို့ရင်ပြင်အခမ်းအနားကို Interchange များအတွက်ကျင်းပခဲ့သည် groundbreaking မြို့လယ်၏သမာဓိအနိုင်ရ။ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်အာဗြဟံသည်Karaosmanoğluအဆိုပါ Interchange နှစ်သစ်ကူးဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါသဲအခမ်းအနား, ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် Intellectual အတွက်မြေပြင် BREAK အခမ်းအနားအကျိုးစီးပွား ...
545 မှ Karamursel Interchange ကျောက်စရစ်ပုံခဲ့ကြသည် 05 / 12 / 2018 Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အပြည့်အဝမြန်နှုန်းမှာတိုးတက်မှုအတွက်အရေးအပါဆုံးKaramürselမြို့ရင်ပြင် Interchange ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သောဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများ, ကဆောင်ရွက်။ အဆိုပါ 19 290 ခုနှစ်တွင်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အတူအသင်းမီတာအကျယ်အပိုင်းချွတ်မီတာအပြည့်အဝမြန်နှုန်းမှာအလုပျလုပျဖို့ရောက်နေပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် 1500 မီတာနှစ်လမ်းသွားလမ်းမကြီးအဖြစ်ပြန်လာ 902 885 မီတာမီတာတောင်ဘက်နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုရာအရပ်ကိုကြာမြင့်မည်အပါအဝင်2310 မီတာ link ကိုလမ်းနည်းလမ်းများအပါအဝင်လမ်းနှင့်အပိုင်းပိုင်း၏မြောက်ဘက်ခြမ်း။ အဆိုပါအပန်းဖြေအလိုတော်ပို့ဆောင်ရေး TRANSIT COMPLETED အခါ။ တစ်ခုလုံးကိုစီမံကိန်းကိုဂိမ်းသို့ 801 545 ပျင်းပုံသူတို့ကို, မိလ္လာ၏ 1290 မီတာ ...
Interchange သစ်ပင်များ Tonami အတွက်လုပ်ဖို့စတုရန်းဖြတ်ခံရရန် 26 / 11 / 2014 Interchange များအတွက်သစ်ပင်များကိုခုတ်ဖို့ Tonami အဆိုပါရင်ပြင်တွင်ကျင်းပပါမည်: Yalova မြို့တော်ဝန် Vefa Salman, Tonami ရင်ပြင်ထဲမှာလုပ်ဖို့ပေါငျးကူးခြင်း, လမ်းဆုံအဘို့အပင်တို့၏ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ကြေညာချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ Salman: "။ တူရကီအတွက် 30 စင်တီမီတာတစ်ဦးချင်းနှင့်အတူတစ်ဦးသစ်ပင်ဖယ်ရှားပစ်ရန်အဘယ်သူမျှမနည်းပညာရှိပါတယ်ကျနော်တို့ဒါကြောင့်သစ်ပင်များသောအရာတို့ကိုဖြတ်နေကြသည်ဖျက်သိမ်းတဲ့အဘယ်သူမျှမအခွင့်အလမ်းရှိသည်," ဟု၎င်းကပြောသည် Yalova နှင့် Bursa နှင့်အတွေး Interchange များအတွက် Izmit အကူးအပြောင်းပွိုင့်များတွင်အရေးပါသောအချက်ဖြစ်သော Tonami ရင်ပြင်ထဲမှာဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ Yalova ပလက်ဖောင်း 158 လမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကတုံ့ပြန်သစ်ပင်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုဖြတ်ဖို့။ Salman ပလက်ဖောင်းများ၏တုံ့ပြန်မှုအကဲဖြတ်, "သင်၌အားကြီးသောတုံ့ပြန်မှုကိုတည်ဆောက်ခြင်း Yalova အတွက်လုပ်ပေးသမျှတုံ့ပြန်မှုအုပ်စုတစ်စုရှိပါတယ်။ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ...
Karamursel ပို့ဆောင်ရေး Interchange အဆိုပါdalcık၏စိတ်သက်သာရာရလိမ့်မည်
Interchange သစ်ပင်များ Tonami အတွက်လုပ်ဖို့စတုရန်းဖြတ်ခံရရန်
Gaziantep ပိုပြီးလုပ်ဖို့ 2015 Interchange မှ xnumx't
Urfa3သစ်ကို Interchange ကျင်းပလိမ့်မည်
metroray ကုမ္ပဏီ Gaziantep တက္ကသိုလ် Interchange ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်လုပ်နေတယ်